समुद्र तट सिजन को माटो मा अनुहार गिर छैन, बाटो मा छ, तपाईं शानदार हेर्न आवश्यक छ। सक्रिय महिला को अवधिको शुरू गर्न पूर्व वजन, तर पनि मान्छे माथि पम्प्ड आफ्नो मांसपेशिहरु। आधारभूत व्यायाम, वजन बढाउनका सक्षम र शरीर मरेको खींच छ कोर्न गर्नेछ जो। को को माथिल्लो र मध्य भाग: यस मामला मा निम्न मांसपेशीमा संलग्न जांघ र चाक।
यो व्यायाम कसरी गर्नुपर्छ? सिद्धान्त धेरै जटिल फरक छैन:
यो पोस्ट लिन आवश्यक छ। को पकड काँध चौडाई भन्दा अलि व्यापक शीर्ष, सधैं हुनुपर्छ। को Palms फिर्ता पठायो र जांघों को पक्ष संग, बाहिर राखिएको हुनुपर्छ। यो स्थितिमा तपाईं सीधा खुट्टा छ गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले काँध चौडाई मा अवस्थित गर्न आवश्यक छ। अलिकति, को कमर मा मोड को काँध फिर्ता लिन र आफ्नो छाती मोड हुन स्थिति खडा। को चिउँडो तल्ला गर्न समानान्तर अवस्थित छ।
अगाडी शरीर झुकाव माथिको स्थिति बिस्तारै फिर्ता लिनुपर्छ र श्रोणि पकड गर्दा।
को झुकाव र लिफ्ट को कार्यान्वयन समयमा, पट्टी shins, घुँडा र नितम्ब छोएर, तिनीहरूलाई सवारी गर्न खुट्टा को सतह नजिक आयोजित हुनुपर्छ।
एक व्यायाम जस्तै को प्रदर्शन मा ढलान, मरेको खींच जस्तै लामो शरीर भुइँमा गर्ने स्थितिमा समानान्तर लिन गर्दैन रूपमा अप गर्नु पर्छ। यो अवस्थामा शोक कम्तिमा मिड-तिघ्रा मा एक स्तरमा हुनुपर्छ।
भएपछि यो स्थिति पुग्यो, यो चाँडै निर्देशन परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। यसरी यो विक्षेपन राख्न आवश्यक छ। को मुर्कुट्टा उठाने जब सजिलै अगाडि आफ्नो चाक सार्न आवश्यक छ। स्थिति सुरु स्वीकार रूपमा हुन उठाने यस्तो समय सम्म बाहिर गर्नुपर्छ। सबैभन्दा कठिन भाग हटाउन हुनेछ जब, श्वास छोड्नुहोस् गर्नुपर्छ।
यो व्यायाम कार्य गर्दा, मरेको खींच रूपमा, छिटो गर्ने मेरुदण्ड को झुकन गर्न, आफ्नो स्थिति परिवर्तन बिना पकड गर्नुपर्छ। आफ्नो खुट्टा मोड, उनको टाउको कुनै पनि मामला मा हुन सक्दैन कम। तपाईं पनि एडी अन्तर्गत foothold राख्न प्रयास गर्नुपर्छ।
हार्ड आफ्नो खुट्टा सिधा राख्न घटनाको तिनीहरूले अलिकति झुकेको हुन सक्छ, जबकि बाँकी स्थितिमा। प्रयोगले को अन्त सम्म तल्लो चरम को स्थिति परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। माथिको कदम सबै दिइएको, यो मृत भनेर ग्रहण गर्न सकिन्छ सीधा खुट्टा मा झुकेको सही प्रदर्शन गरिनेछ।
त्यहाँ जो तपाईं प्रदर्शन अभ्यास गर्दा सुन्न चाहनुहुन्छ सुझाव को एक जोडी हो। पहिले, यो व्यायाम को सम्पूर्ण प्रक्रिया चलिरहेको बेला आफ्नो फिर्ता गोलो छैन आवश्यक छ। यसलाई बनाउन गाह्रो छ भने, यो व्यायाम रोक्न सबै भन्दा राम्रो छ। यो जारी छ भने, तपाईं गर्न सक्नुहुन्न गम्भीर फिर्ता घाइते।
दोश्रो, तपाईं एक मृत खींच प्रदर्शन भने तल देखि घाँटी, मोड्नु हुँदैन। अन्यथा, यो एकदम व्यायाम हुनेछ, र यसैले संलग्न गरिनेछ मांसपेशीमा छैन नै हो।
तेश्रो, खुट्टा सिधा राखिएको हुनुपर्छ। यो मांसपेशी संकोचन वृद्धि हुनेछ।
चौथो, आफ्नो हात वा कमर संग फलाम को दंड पुल छैन। सबै आन्दोलन गर्ने जांघ मांसपेशीमा र चाक को रियर को प्रयासमा मार्फत बाहिर गर्नुपर्छ। अन्य सबै जोइन्टहरूमा तय गर्नुपर्छ।
र सबै भन्दा महत्वपूर्ण: जो चोट सुरक्षित हुनेछ, एक भारी वजन बेल्ट यो व्यायाम प्रदर्शन गर्दा प्रयोग गरिनुपर्छ।
तपाईं कसरी उठबस गर्न थाह
Kegel पुरुष र महिला लागि अभ्यास
जो चाहनुहुन्छ ती कसरी चलाउन जान्न को लागि, मांसपेशी निर्माण गर्न
कफी नेस्प्रेस्सो: एक स्वादिष्ट कफी रूपमा पाइ रूपमा सजिलो खाना पकाउनु
आभूषण र गहने यसलाई देखि लागि epoxy राल
टुला होटल: विविधता र विकल्प
जस्तै नङ सही बिरालोहरु कटौती?
Buggies Cosatto Supa: समीक्षा
किशोरों मा अवसाद: एक प्रकटीकरण र उपचार
"Pancreatin 8000": प्रयोगको लागि निर्देशन। ट्याब्लेटको के बाट "Pancreatin"?